Nilaza anefa ny Filoham-pirenena fa iny vanim-potoana taorian’ny fety hatreo amin’ny 10 janoary iny no hahitana na miakatra na tsia ny tranga, ary eo no andraisana fanapahan-kevitra. Nisy fidinany ny olona voan’ny coronavirus tao anatin’ny herinandron’ny taom-baovao, saingy niakatra kosa ny isan’ny maty. Sanganehana ny rehetra hoe: ahoana ny tohiny? Ireo fepetra noraisina teo aloha izany no mbola mitoetra? Manao ahoana ny fahafahana mamory olona ho an’ireo seehatra mivelona amin’izany? Ny Fanjakana izao no nilaza fa hiankinan’ny fanapahan-kevitra ny taorian’ny fety, saingy sanganehana ny rehetra,… Ny fampianarana anefa naato ary ny 17 janoary vao hiverina, ka miankina amin’izay tokony ho nambaran’ny Fanjakana omaly ny fiomanan’ny rehetra,… Fanendrena tompon’andraikitra ara-panjakana maro be efa 60 mahery no nivoitra tao, izay midika fa hatramin’izao mbola ao anatin’ny fametrahana olona ihany. Teo ihany koa ny fandraisana an-tànan’ny Fanjakana momba ny “droits et taxes” mikasika ireo entana sy fanampiana samihafa toy ny fitaovana ara-informatika ho an’ny Minisiteran’ny atitany avy amin’ny PNUD (Sampan-draharahan’ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana), fampidirana fiara sy fitaovana fanamboaran-dàlana, fampidirana masomboly apemba na sorgo nafaran’ny fandaharan’asa ara-tsakafo maneran-tany na ny FAO, ny nanafarana pasipaoro elektronika Malagasy,… no isan’ny nanamarika ny filankevitry ny minisitra omaly.